*မလေးရှား အချုပ်ခန်းရောက် မြန်မာများရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်*
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ နိုင်ငံတကာလေဆိပ် အနီးရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းမှ
မြန်မာ အလုပ်သမားများ ဆေးဝါး ကုသခွင့် မရသဖြင့် ကျန်းမာရေး
အချုပ်ဆောင် တခုတည်းတွင် လူပေါင်း ၆၀ ခန့် ကျပ်တည်းစွာ နေရသည့်
အတွက် ရောဂါ ကူးစက်ရန် လွယ်ကူနေသည်ဟု အထိန်းသိမ်းခံ နေရသူ
တဦးဖြစ်သည့် ကိုသန်းထွန်းစိုးက ပြောသည်။
“ယားနာပေါက်တဲ့ လူတွေက ဆေးဝါး ကုသခွင့် မရှိပါဘူး၊ ကျနော်လည်း
၂ လလောက်ရှိပြီ ယားတာ။ လူတွေ အပြင်းအထန် ဖျားနာမှ ဆေးကုပေးတယ်၊
တပတ်မှာ ဆေးကုခွင့်က ၄ ယောက်ပဲ ရတယ်” ဟု ကိုသန်းထွန်းစိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် အသီးအရွက်များကို ကျွေးမွေးခြင်း မရှိဘဲ
ငါးဟင်းကိုသာ အဓိကထား ကျွေးသဖြင့် အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့နေကြကြောင်း၊
ဆပ်ပြာ မရှိသဖြင့် အများစုမှာ ယားနာများ စွဲကပ်နေကြောင်း ကိုသန်းထွန်းစိုးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာပြည်သားများသည် မလေးရှားတွင် လပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းခံနေရခြင်း
ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ကွာလာလမ်ပူ လေဆိပ် အနီး ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်မှာ ၂ လ ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြေအနေ ဆိုးရွားသည့် အချုပ်ခန်းများအတွင်း လူအများအပြား
ပိတ်လှောင်ခံထားရကြောင်း ထိန်းသိမ်းခံနေရသူ တဦးဖြစ်သည့် ကိုခိုင်မင်းက ပြောသည်။
“အလုံပိတ်ထားတော့ လမ်း မလျှောက် ရတာကြာပြီ၊ ပြင်ပက လေနဲ့ နေရောင်
မရတော့ ပိုဆိုးတယ်။ ကျနော်ကတော့ ခြေထောက်တွေ ယောင်နေတယ်” ဟု ကိုခိုင်မင်းက ပြောသည်။
မလေးရှားတွင် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်း မရှိဘဲ နေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဖြင့်
ဖမ်းဆီးခံထား ရသော နိုင်ငံခြားသား ၇၀၀၀ ခန့် ရှိနေသည်။ မြန်မာပြည်သားမှာ
အများစု ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် အားဖြင့် ၂၈၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု မလေးရှားမှ လာသည့်
AP သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရသူများ အတွက် နေရာ
ထိုင်ခင်း အလုံ အလောက် မရှိဟု ဆိုသည်။
တရားမ၀င် နေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများကို ရက်အနည်းငယ်သာ ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ် တည်ဆောက်ထားသည့် ထိုစခန်းများတွင် မြန်မာပြည်သားများ သောင်တင်နေရခြင်းမှာ
မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံး၏ အားနည်းချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ သံရုံးက ထိန်းသိမ်းခံထားရသူ
မြန်မာတဦးထံမှ အချက်အလက် ရယူပြီး မှတ်ပုံတင်သည့် လုပ်ငန်း အတွက် ၆ လခန့်
အချိန်ယူလေ့ရှိကြောင်း AP သတင်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် နေရပ်ရင်း ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ရင်းဂစ် ၆၂၀ (ဒေါ်လာ ၁၈၀ ခန့်)
တခြား နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများမှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီး တပတ်အတွင်း
နေရပ်ရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားလေ့ ရှိပြီး မြန်မာ ပြည်သားများသာ
လပေါင်းများစွာ ချုပ်နှောင်ခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃ လ က Pulau Pinang ပြည်နယ်ရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာန
ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း တခုတွင် ကြွက်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် အဖျားရောဂါ
တမျိုးကြောင့် မြန်မာ အလုပ်သမား ၂ ဦး သေဆုံး သွားသည်။
ထိန်းသိမ်းခံရစဉ် အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်သည်ဟူသော သတင်းများလည်း
မကြာခဏ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေများကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်
လဆန်းပိုင်းက Kajang မြို့နယ်၊ Semenyih အရပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ဌာန (လဝက) အချုပ်ခန်းတွင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက
ထိုအချုပ်ခန်းမှ မြန်မာ အလုပ်သမား တချို့ကို ကွာလာလမ်ပူ လေဆိပ် အနီးရှိ
ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် လူ့အခွင့်အရေး
စံချိန်မှာ နိမ့်ကျနေကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသား မုန်းတီးမှုလည်း အလွန်များကြောင်း၊
ထိုသို့ မုန်းတီးမှုကြောင့် ပြဿနာ များစွာ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ကြားသိရသည်။
ကျမ ဧရာဝတီ သတင်းကနေဖတ်ပြီး ကျမစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်
ထပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ်နိူင်ငံမှာ ဘဝရဲ့
ရပ်တည်ချက်ဆိုတာ မသေချာတော့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာကို ခြေဆန့်ရတာလေ
မလေးရှားရောက်နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့ မိသားစုတွေ ဒီသတင်းကိုကြားရရင်ဖြစ်
ဘယ်လောက်တောင်စိတ်သောက တွေပင်လယ်ဝေကြမလဲ ကိုယ်ချင်စာမိခဲ့ပါတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နိူင်ငံမှာ စီးပွားရေး လုပ်လို့မရလို့ မိသားစုဝမ်းစာကို
စစ်ခွေးတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေခံနေရတဲ့ မြန်မာဘဲဖြစ်ဖြစ်။ကိုယ်နိူင်ငံသား
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, August 29, 2009 Links to this post
*အဆစ်အမြစ် ယောင်ခြင်း နာခြင်း*
*အဆစ်အမြစ် ယောင်ခြင်း နာခြင်း* အကြောင်းလေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျမကိုယ်တိုင်ဒီရောဂါကိုခံစား နေရတဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ကျမဒီရောဂါကို အသက် (၂၄)
ထဲက ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ယနေ့ထိပါဘဲ လုံးဝအရှင်းမပျောက်ပါဘူး။(၁၃နှစ်-၁၄နှစ်)လောက်ရှိပါပြီး
ဒီရောဂါ ဖြစ်နေရင် လက်တွေရောင် ခြေထောက်တွေရောင် မျက်နှာတွေရောင်
မိုးတွင်းဆိုရင်ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ မိုးရေကိုမထိမိကြပါနဲ့ ကျမကိုယ်တွေ့ပါ။
ကျမဆိုမိုးမိလိုက်တာနဲ့ လက်ဆစ်တွေရောင် ခြေဆစ်တွေရောင် တော့တာပါဘဲ။
ကျမမှာ ဒီရောဂါနဲ့ဆီးချိုရောဂါ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်.ဆီးချိုရောဂါ သိကောင်းစရာ
အင်္ဂလိပ်လို Arthritis ဆိုတဲ့စကားဟာ အဆစ်အမြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊
တောင့်တင်းခြင်း နဲ့ ယောင်ကိုင်းလာခြင်း စတာတွေ အားလုံးကို
ယေဘူယျခြုံပြောလိုက်တာပါ။ တဆစ်ပဲနာနာ နှစ်ဆစ်ပဲနာနာ
အဆစ်နာရောဂါပါပဲ။ ဆရာဝန်များ ယခုအချိန်ထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ထားသလောက်ဆိုရင်တော့ အဆစ်နာရောဂါပေါင်းဟာ ၁၀၀ ကျော်ကျော်ရှိပါသတဲ့။
အဆစ်နာရောဂါဟာ ဘယ်လောက် အဖြစ်များ သလဲဆိုရင်
ကမ္ဘာပေါ်က လူ ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက် နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်။
အဆစ်နာအမျိုးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထဲက အဓိက ဖြစ်လေ့ရှိတာကတော့
Osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ပွန်းစားအဆစ်နာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့
မြန်မာပြည်မှာ သိပ်တွေ့ရလေ့မရှိသော်လည်း အနောက်တိုင်းအဖြစ်များတဲ့
Rheumatiod arthritis ခေါ် သွေးလေးဖက်နာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ အဆစ်နာရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်
ကုလို့ရတဲ့ ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ ဆေးဝါးလေးနဲ့ နဲနဲထိန်း၊ တဖက်ကလည်း
လေ့ကျင့်ခန်းလေး ဘာလေးလုပ် စသည်ဖြင့်တော့ အဆစ်နာခြင်းကို သက်သာအောင် ကြံဖန်လုပ်နေကြရတာပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာမှ ကျန်းမာရေးအသိရှိခြင်း နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
အဆစ်နာခြင်းဟာ ကျားမ မရွေး အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် တချို့သော အဆစ်နာရောဂါတွေကတော့ ဒုတိယအရွယ်နဲ့
တတိယအရွယ်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များကြပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့
- အချိန်ပြည့် အဆစ်ထဲမှ ကိုက်ခဲနေခြင်း နှင့် လှုပ်ရှားမှုပြုသည့်
- အကွေးအဆန့်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆစ်အတွင်းမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော
အသံများထွက်ခြင်း စသည်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို
တချို့က လေးဖက်နာလက္ခဏာတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး ရောဂါကိုလည်း
လေးဖက်နာရောဂါလို့ နာမည်တပ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့
လေးဖက်နာရောဂါဆိုတာ အဆစ်နာရောဂါတွေထဲက အချို့ပါပဲ။
အရိုးနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာဟာ အဆစ် ပေါ့လို့ လွယ်လွယ်ပြောရင်ရပါတယ်။
အဆစ်တစ်ခု လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ဘာတွေပါရသလဲ ဆိုတာတော့ သိထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
- Muscles ကြွက်သားများ - အဆစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရိုးများနှင့်
ဆက်နွယ်နေသည့် ကြွက်သားများသည် လှုပ်ရှားမှု အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
- Tendons အရွတ်များ - ကြွက်သားများ နှင့် အရိုးများကို ဆက် ထားသော
အရာကို အရွတ် ဟုခေါ်သည်။
- Ligaments အကြောများ - သည် အရိုးတစ်ခုနှင့် တစ်ခု အလွယ်တကူ
- Cartilage အရိုးနု - များသည် အရိုး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်ရိုက်ထိတွေရာတွင်
- Bursa - ကြွက်သားအချင်းချင်း အကြား၊ ကြွက်သားနဲ့ အရိုးကြား
အပေါ်မှာပြောခဲတဲ့ အဆစ်တစ်ခုမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်
အဆစ်နာတော့တာပါပဲ။ သွေးလေးဖက်နာရောဂါ Rheuamtiod arthritis မှာဆိုရင် အဆစ်အမြှေးပါးယောင်လို့ဖြစ်တာပါ။ Ankylosing spondylosis ဆိုရင်တော့
ခြေဖနောင့်နဲ့ ခါးဆစ်တွေမှာရှိတဲ့ အရိုးနဲ့ ဆက်နေတဲ့ အရွတ်တွေ ယောင်လို့ဖြစ်တာပါ။
အဆစ်အတွင်း ပုံဆောင်ခဲ အနယ်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါကိုတော့ ဂေါက်ရောဂါလို့
အသိများကြပါတယ်။ အဆစ်တစ်ခုခုထဲကို အခန့်မသင့်ပဲ ရောဂါပိုးဝင်သွားခြင်းကြောင့်
လည်း အဆစ်နာနိုင်ပါတယ်။ အရိုးနှစ်ခု တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ရအောင် ကြားခံထားပေးတဲ့
အရိုးနုတွေ ကာလကြာမြင့်သည်နှင့်အမျှ ပွန်းစားသွားသောကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့
ပွန်းစားအဆစ်နာရောဂါကတော့ အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။ ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့်
သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသော အကြောင်းများကြောင့် သော်လည်းကောင်း အဆစ်နာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံစားရတာခြင်းမတူသလို ကုထုံးများလည်း
ကွဲပြားကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲတောင် တစ်ရက်နဲ့ တစ်ရက် ရောဂါလက္ခဏာ
အပြင်းအပျော့ခြင်း တူချင်မှတူမှာပါ။ ကုထုံးတွေလည်း အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရှိပါတယ်။
- ဆေးဝါးများ အကူအညီယူခြင်း - အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ လေးဖက်နာဆေး
- အဆစ်နာ ဆိုတာ အဆစ်နာတဲ့ ရောဂါအကုန်လုံးကို ယေဘူယျခြုံခေါ်ထားတာပါ။
- အဆစ်နာအများစုမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ အဆစ်ကို ငြိမ်ငြိမ်လေးထားမယ့် အစား
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ နောင်တစ်ချိန်
အဆစ်တောင့်ခဲသွားခြင်းနဲ့ ကြွက်သားသိမ်သွားခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, August 28, 2009 Links to this post
*ဟောက်တတ်သူများ အတွက် ဟောက်ခြင်း အကြောင်း*
ဟောက်ခြင်းသည် အိပ်နေစဉ် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းတို့မှ ထွက်ပေါ်လာသော
အသံဖြစ်ပါသည်တဲ့။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကတော့ အိပ်နေတုန်း
အသက်ရှူတဲ့ အခါ ရှူသွင်း ရှူထုတ်သော လေလမ်းကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
မရှိလို့ပါပဲ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာသွားရတဲ့လေဟာ
နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း စတာတွေရဲ့ နံရံတွေကို တိုက်ခတ်တုန်
လှုပ်စေခြင်းဖြင့် ဟောက်တဲ့ အသံတွေထွက်လာရတာပါ။ လေလမ်းကြောင်း
ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း တလျှောက် အသားပို
အဆီပိုတွေများနေခြင်း နဲ့ သက်ဆိုင်သလို၊ လူရဲ့ အိပ်တဲ့ပုံစံအနေအထား၊
အများသိကြတဲ့အတိုင်း ဟောက်တဲ့သူအတွက် ဟောက်ခြင်းဟာ တော်ရုံ
ဒုက္ခပေးလေ့မရှိပါဘူး။ သူဟောက်တတ်တယ်ဆိုတာတောင် သူ့ကိုယ်သူ
သိချင်မှသိမှာပါ။ အဲ.. ဒုက္ခရောက်တာကတော့ သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိသားစု၊ အိမ်နီးနားချင်းစတာတွေပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ကလည်း အိပ်မပျော်တဲ့ညမှာ
ဟောက်တတ်တဲ့သူက ဘေးမှာဆိုရင်တော့ .. ခံစားရပြီပေါ့။
ဟောက်ခြင်းထက် တဆင့်ပိုလာရင်တော့ အိပ်နေစဉ်လေငတ်ခြင်း
Sleep Apnoea ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။
ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် အသက်ရှူလေလမ်းကြောင်း နဲ့ အားပါးတရဟောက်ပြီး
အသက်ရှူနေရတဲ့ အချိန်မှာ အခန့်မသင့်ရင် လေလမ်းကြောင်းလုံးဝ
ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင် ဟောက်တဲ့သူဟာ အသက်ရှူ
စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ရပ်ရပ်သွားပါတယ်။ တခါတလေ အသက်ရှူရပ်ပြီးလန့်နိုးပါတယ်။
ခဏခဏ လန့်လန့်နိုးလို့ နောက်ဆို အဲသလို နိုးတာကိုတောင်
သတိမထားမိနိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ဖာသာမသိပဲ တစ်ညလုံး ဟောက်လိုက်၊
အသက်ရှူရပ်လိုက်၊ လန့်နိုးလိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဟောက်တဲ့လူ တချို့ ဆို ဘယ်တေ့ာမဆို အိပ်ရေးမ၀ ဖြစ်နေပြီး
နေ့ခင်းဖက်လည်း တချက်တချက် ငိုက်ငိုက်သွားတတ်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ Soundbox ဆိုက်ကွာ လို့ထင်ပါတယ်။ အသံ
အတိုးအကျယ်အပြင်၊ အနုအကြမ်းလည်း ကွာပါတယ်။ အတက်
အဆင်းလဲရှိပါတယ်။ ဂီတလိုပြောရရင် Crescendo, Descendo ဖြစ်ပါတယ်။
Timing လည်းကွာပါတယ်။ ဟောက်တဲ့ အသံကိုသေသေချာချာ
လိုက်နားထောင်ရင် Human Beatbox (Classical)ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောက်ရာကနေ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အသက်ရှူရပ်ရပ်သွားတဲ့
အဆင့်ကို ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါပြီ။
(ဘာကြောင့်ဟောက်တာလဲ)။
လူတစ်ယောက် အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပုံမှန်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ
ယေဘူယျအားဖြင့် လျော့သွားပါတယ်။ အာခေါင်၊ လည်ပင်း၊ နှာခေါင်း စသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲသွားခြင်းကြောင့်
လေရှူသွင်း ရှူထုတ်တဲ့ အခါ ကြွက်သားနံရံတွေကို တုန်ခါမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။
ရူပဗေဒမှာ ပြောသလိုပါပဲ တုန်ခါမှု = အသံ။
၀သောသူများမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း တလျှောက်အသားပိုအဆီပိုများ
အရက်သောက်ခြင်း၊ အိပ်ဆေးသောက်ခြင်းကြောင့်လည်း အိပ်ပျော်နေစဉ်
ပုံမှန် ဆေးလိပ်သောက်ရင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနံရံများ ယောင်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ လေလမ်းကြောင်းကျဉ်းသွားစေပြီး ဟောက်နိုင်ပါတယ်။
အာသီးယောင်သူများ၊ အာသီးကြီးသူများ၊ အာခေါင်စောက် တိမ်သူများ
ဟောက်ခြင်းအတွက် ဥုံဖွ ကုထုံးမရှိပါဘူး။ လူတွေကတော့ အမျိုးမျိုး စမ်းလုပ်ကြည့်နေကြတာပါပဲ။ အဓိကလုပ်ရမှာတွေကတော့ -
နှာစေးပြီး နှာခေါင်းမပိတ်ပါစေနဲ့။ နှာခေါင်းပိတ်နေပြီး ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှူခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
နှာခေါင်းပွင့်အောင် ပရုတ်ဆီ၊ ယာပန်းဆီ ရှူခြင်းလုပ်ပါ။ ယာပန်းဆီ တစက် နှစ်စက် ခေါင်းအုံးတွင်ဆွတ်ထားပါ။ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက် နှာခေါင်းထဲ ပန်းဆေးများကို
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်နည်းနဲ့မှ မရရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြပါတော့။ တခါတလေ ဟောက်ခြင်းအတွက်
ခွဲစိတ်မှု တောင်လုပ်ရင် လုပ်ရတတ်ပါတယ်။
သာမန်ဟောက်ခြင်းကတော့ ညညကျ မိန်းမ ထထဆိတ်ခြင်း ခံရတာက
လွဲလို့ ပြဿနာ အထူးအထွေမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်ရှူရပ်ရပ်သွားတဲ့
Obstructive Sleep Apnoea ဆိုရင်တော့ အိပ်ရေးမ၀ခြင်း၊
သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ လေဖြတ် ရောဂါတွေ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
http://health.ngoinmyanmar.org/ မှတွေ့လို ဖတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟောက်တတ်သူတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေကို ကိုယ်ချင်စာစွာဖြင့်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, August 27, 2009 Links to this post
*သင်းဇူလိုင်ကျော် ခေါ် ဖိုးမူလေး*
*သင်းဇူလိုင်ကျော် ခေါ် ဖိုးမူလေး* အတွက် အမှတ်တရ စာလေးတင်လိုက်ပါတယ်။
ဖိုးမူလေးကို တော့သိချင်လဲ သိကြမှာပါ။ သူကတော့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နိူင်ငံရေးမှုနဲ့
အကျဉ်းကြခံနေရပါတယ်။ ယနေ့ထိပါ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် ကိုယုဇနာဂါးဒင်း
ကော်ဖီဆိုင်မှာ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး စဉ်မှာ ဖိုးမူးလေးနဲ့တူတူ ကော်ဖီသောက်နေ့ကြတာပါ။
ဖိုးမူလေးကို (၂)နှစ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချခဲ့တယ်။ဖိုးမူလေး ခုတော့
(ပြည်) ထောင်မှာနိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်အဖြစ်နဲ့ နေထိုင်နေရပါတယ်။
ဖိုးမူလေးရဲ့ အမတွေနဲ့က ကျမတို့တွေနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။
သူအထက်က ဖိုးသားကတော့ တဦးတည်းသောသားပါ။ မိန်းခလေး(၆)ယောက်
သူအမ မရူပါရွှေ ကတော့ ကျမအမနဲ့သူငယ်ချင်းပါ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် တိုင်းရုံးမှာ ကျမ ရဲ့အမရယ်ကျမတို့ရယ်နဲ့
အတူတူမရူပါက လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီအချိန်က (၈၉)ခုနှစ်ကဆိုတော့ ဖိုးမူလေးကခလေးလေးပေါ့။
ဖိုးမူလေးတို့ ဇာတိက မိုးကုတ်မြို့် (ကြက်ပြင်)ကပါ။ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာနေတာများပါတယ်။
ကျမတို့နဲ့က တလမ်းထဲမှာတူတူေ နကြတာ(ရန်ကုန်)မှာဖိုးမူလေး အဖမ်းခံရတယ် ကြားတုန်းက
စိတ်မကောင်း အရမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူကိုသံယောဇဉ် ရှိခဲတာကို ကျမတို့လက်ပေါ်မှာ
ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ခလေးတယောက်ဆိုတော့ ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့
သူကိုအရမ်းလေးစားသွားပါတယ်။ခုချိန်မှာသူက ခလေးတယောက်မဟုတ်တော့ပါဘူး ။
ကျမတို့ မြန်မာပြည် ကြီးကိုအလှဆင် ကြမဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
မျိုးဆက်သစ် တွေထွက်ပေါ်လာတော့ ကျမညီမလေးလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဖိုးမူလေးပါလာလို့ပါ။
ထောင်ထဲမှာ အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမှာဘဲ။ မိန်းခလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့
ဖိုးမူလေးကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထောင်ထဲမှာ နေရတာကိုတွေးကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းဘူး။
ကျမသူငယ်ချင်း နီမာ(နီလာသိန်း)ကပြောဘူးတယ်. သူတို့ သာယာဝတီထောင်ထဲမှာနေတုံး
ကအကြောင်းတွေကိုပြော ပြဘူးတယ် သူတို့ အကျဉ်းသူအချင်းချင်း ဘယ်လိုနေရတယ်
ထိုင်ရတယ်ဆိုတာတွေကို. တချို့ ကလဲ စိတ်ဓာတ်တွေ လုံးဝ မကောင်းကြဘူး။
စိတ်ဓာတ် မကောင်းတဲ့ လူတွေကတော့ လက်ချိုး ပြီးမှတ်လို့ ရပါတယ် သူတို့ ထောင်သမိုင်း
တွေကိုပေါ့.။သူက(နီလာသိန်း)ပထမ တခါထောင်ကျတုန်းက သာယာဝတီထောင် မှာနေခဲ့ ရပါတယ်။
သူလို အတွေအကြုံမျိုး ဖိုးမူလေးလဲ ရမှာပါဘဲ ။
သူမိသားစုလဲ ဘယ်လောက်တောင် ပူဆွေးနေရမလဲဆိုတာကို
ကျမကိုယ်ချင်းစာနာမိပါတယ်။ အမှောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့ ဖိုးမူလေး
အလင်းရောင်လာတော့မှာပါ။ ဖိုးမူလေးရေ သမီးရဲ့ သမိုင်းက လှပ ထိန်းလင်းပြီးတော့
ဒေါင်းတွေရဲ့ အတောင်တွေလို လေထဲမှာ တဝဲဝဲနဲ့ နေမယ်ဆိုတာ ကို သမီး သိမှာပါ။
သူလိုဘဲ မိဘတွေက ပြည့်စုံ ကြပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွက် ကိုယ်ကြိုးစွန့်ပြီး
အနစ်နာခံနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအများကြီးပါ ။ ယခုထိ စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့
ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လုပ်နေကြတဲ့ လူတွေလဲ အများကြီးပါဘဲ။
ဘာကိုမှ မကြောက်ရွံဘဲ ရှေ့သို့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင် နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ
ကိုယ်ဘဝကိုစတေးပြီး လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ အများကြီးပါ။
*သင်းဇူလိုင်ကျော် ခေါ် ဖိုးမူလေး* အမြန်ဆုံး မိသားစုတွေနဲ့ ဆုံတွေ ရပါစေ။
ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဘေးကင်းရန်ကွာပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲ ကနေလွတ်မြောက်ပါစေ။
ညီမလေးရေ ..အမှန်တရားရဲ့ ဝိညာဉ်တွေက...ဝေဟင်မှာ လွတ်လပ်စွာ.. ဝဲပျံနေမှာပါ..
ခွပ်ဒေါင်းတို့ ရဲ့..အိုး ဝေ သံတွေက...အာကာယံသို့ လွှင့်ပျံ နေမှာပါ..
*ရွှေဝါရောင် တော်လှန်းရေး အမှတ်တရ*
“သံဃာတော်” တွေသွေးမြေ ကြခဲ့ရတဲ့ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိူင်တဲ့ အရိပ်မဲတွေပါဘဲရှင်။
ကျမတို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ မရှိပေမဲ့ ဒီအဖြစ် အပျက်တွေကတော့ သတင်းဌာန
ပေါင်းစုံ ကနေကြည့်ပြီး “သံဃာတော်” တွေကိုကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားခဲ့တဲ့
စစ်ခွေးများ ကိုဘယ်တော့မှ ရာဇဝင်ကြွေး မကြေးပါဘူး။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကို နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး လုပ်ချင်သလို
လုပ်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေ မိသားစုတွေနဲ့ခွဲ သားတွေဇောနဲ့ သေဆုံးသွားရတဲ့မိဘတွေ
သမီးတွေဇောနဲ သေဆုံးသွားရတဲမိဘတွေ အမြောက်အများပါဘဲ။ကျမတို့က
ဒီဘက်ကို ထွက်လာမိတာ မတရားဘူလို့တောင် ထင်မိပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်း
ကနေပြီး ယနေ့ထိတိုင် ခံယူချက်အပြည့်နဲ့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင် နေကြတဲ့
“သံဃာတော်” များ ၊ လူထုခေါင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်
အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား သူငယ်ချင်းများ
ခေတ်အဆက်ဆက် မျိုးဆက်သစ် မောင်နှမတွေကို လေးစားဂုဏ်ပြုလျှက်။
ကျမတို့ (ပန်းတိုင် )ကိုရောက်ဘို့ အားလုံးညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲ
ဝင်ကြပါစို့ ။ ပြည်ပ ကိုရောက်နေတဲ့ ကျမ တို့လို ညီအကိုမောင်နှမ တွေလဲ
ကိုယ်လုပ်နိူင်တဲ့ ဘက်ကနေပြီး တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ကိုင်ကြပါစို့။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, August 26, 2009 Links to this post
*အို ရအုံးမဲ့ လူတွေ ဘဝ*
အိုသွားသောအခါ ငါဟာ အရင်က ငါမဟုတ်တော့ဘူး။ ငါ့ကိုနားလည်ပေးပါ။
ချည်နဲ့နဲ့ လက်တွေနဲ့ ထမင်းဟင်းတွေ အကျီ င်္ပေါ် ဖိတ်စင်သွားတဲ့အခါ အကျီ င်္၊
လုံချည် ဖိုသီဖတ်သီဖြစ်နေတဲ့အခါ ငါ့ကိုမရွံပါနဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါသုတ်သင်
ပေးခဲ့တာတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး သတိရပေးပါ။
အပ်ကြောင်းထပ်မက ပြောဖူးတဲ့ စကားတွေ ပြန်ပြောမိတဲ့အခါ စကားမဖြတ်ဘဲ
ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပေးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ရာဝင်တိုင်း တစ်ထောင့်တစ်ည
ပုံပြင်တွေ၊ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်တွေ၊ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေ စတဲ့ ပုံပြင်တွေကို
မရိုးအောင် ပြောရင်း ငါချော့သိပ်ခဲ့တာကို သတိရပေးပါ။
မလှုပ်ရှားနိုင်လို့ ရေချိုးဖို့ အကူအညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကို မငြိုငြင်ပါနဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက
ချော့တစ်လှည့်၊ ခြောက်တစ်လှည့် ရေချိုးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မြင်ယောင်ပေးပါ။
ခေတ်သစ် နည်းပညာသစ်တွေကို မသိနားမလည်ခဲ့ရင် မလှောင်ပါနဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက
'ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့' မေးခွန်းတိုင်းကို စိတ်ရှည်စွာ ငါပြန်ဖြေခဲ့တာကို သတိရပေးပါ။
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ နွမ်းလျပြီး လမ်းမလျောက်နိုင်တဲ့ အခါ ခွန်အားပါတဲ့
လက်တစ်စုံနဲ့ ငါ့ကို ကူတွဲပေးကြပါ။လမ်းလျောက်သင်စ အရွယ်တုန်းက
တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းလျောက် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာတွေကို သတိရပေးပါ။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ ငါ့ကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းမနည်းပါနှင့်။
နားလည်ပေးပါ။ အားပေးပါ။အရင်တုန်းက လူ့ဘ၀ တက်လမ်းအတွက်
ငါလမ်းညွှန်ခဲ့သလို အခုအချိန်မှာ ငါ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် အဖော်ပြုပေးပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အေးမြမှုတွေကို ငါပြုံးပြုံးလေး လက်ခံမှာပါ။ အဲဒီ အပြုံးတွေထဲမှာ
မဆုံးတဲ့ ငါ့မေတ္တာတွေ တွေ့ရမှာပါ။
ကျွန်မအမေ့ကိုလဲ သတိရမိပါတယ်။ အခုလောလော ဆယ်တော့ မိဘတွေကို
ကိုယ်ထိလက်ရောက် မပြုစုနိုင်သေးဘဲ ကျန်းမာစေဖို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပဲပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျမလိုဘဲ မိဘတွေနဲ့ ဝေးကွာနေကြတဲ့ သားသမီး တွေလဲခံစားနိူင်ကြပါစေ။
ကျမလဲ တချိန်ကြရင် ဒီလိုခံစား ရမှာ ဘဲလေ။ ကျမ သားလေး ကိုနားလည်အောင်
သွန်းသင်ပြရင်းနဲ့ဘဲ ။ အဝေးမှာ ရှိတဲ့ ကျမ မေမေ ကိုစိတ်ထဲကသာ လုပ်ပေးနေရပါတယ်။
လူတိုင်းရှောင်လွှဲ လို့မရတာဘဲ။ ဒီစာလေးကို ကျမကိုပို့ ပေးပို့လိုက်တဲ့
သူငယ်ချင်းကို ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, August 25, 2009 Links to this post
Labels: လူတိုင်းဖြစ်ရမဲ့ ဒုက္ခ
*လူသား ဒေါင်းလေးများ အကြောင်း*
လူသား ဒေါင်းလေးများအကြောင်း ကိုစိတ်ဝင်စား လို့သေချာလေ့လာ ပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကျမတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒေါင်းလေးတွေ မွေးတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါ၊သိပ်အံ့သြ မသွားပါနဲ့.
တနည်းအားဖြင့် ဒေါင်းစင်ဒရုန်း ( Down's Syndrome ) လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇဖွဲ့
စည်းပုံနဲ့ပက်သက်ပြီး ဝေဒနာခံစားနေကြရတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေပါ။ဒီလို ဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်လေးတွေဟာ လူသားတစ်ယောက် ၊ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့
အပြည့်အ၀ ရပ်တည်ခွင့်မရကြပါဘူး ။ သူတို့လေးတွေမှာ မွေးရာပါ ရောဂါတစ်ခုကိုပါ လောကထဲသယ်ဆောင်လာခဲ့ရပြီး ၊ အခြားသော ရောဂါတွေကလည်း သူ့ဘ၀လေးကို
ချွေဖျက်ဖို့ အသင့်စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ဒီလိုကံတရားရဲ့ မျက်နှာသာပေးမခံရတဲ့
ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေဟာ အလွန်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် သနားစရာ ဒေါင်းလေးတွေအကြောင်းကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါင်းစင်ဒရုန်း ( Down's Syndrom )ဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပက်သက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊
ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ သာမန်ကလေးငယ်တွေထက် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာ နှေးကွေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော မွေးရာပါ ခန္ဓာကိုယ်ချို့ယွင်းချက်တွေလဲ ပါရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မိခင်ရဲ့ အသက်အရွယ်ဟာလည်း ဒေါင်းလေးတွေမွေးဖွားဖို့အတွက် အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့
ပါဝင်ပါတယ်။မိခင်အသက် ၂၀ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းတွင် ကလေး ၁၄၉၀ မွေးတိုင်း ဒေါင်းကလေးတစ်ယောက်ပါရှိနိုင်ပါတယ်။မိခင်အသက် ၃၀ တွင် ကလေး ၉၀၀
မွေးတိုင်း ဒေါင်းလေးတစ်ယောက်ပါရှိနိုင်ပါတယ်။မိခင်အသက် ၃၅ ကျော်လျှင်
ကလေး ၄၀၀ မွေးတိုင်း ဒေါင်းလေးတစ်ယောက်ပါရှိနိုင်ပါတယ်။
မိခင်အသက် ၄၀ တွင် ကလေး အယောက် ၁၀၀ မွေးတိုင်း ဒေါင်းလေးတစ်ယောက်ပါရှိပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် မိခင်ရဲ့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဒေါင်းကလေးငယ်များမွေးနိုင်တဲ့ နှုန်းဟာလည်းပိုများလာပါတယ် ။
ဒေါင်းလေးတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိသာထင်ရှားတာကတော့ မျက်နှာအနေ
အထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာမြင်ရုံနဲ့ ဒေါင်းလေးမှန်းသိသာပါတယ်။
၁။ ခေါင်းဟာ သာမန်ထက်သေးငယ်ပါတယ် ( Microcephaly )
၂။ နောက်စေ့ဟာ ပြားနေပါတယ် ( Flattened Occiput )
၃။ နှာခေါင်းရိုးပြားနေပါတယ် ( Flattened Nasal Bridge )
၄။ပါးစပ်ပေါက်ကသေးငယ်ပြီး လျှာက ကြီးမားနေသောကြောင့် လျှာက ပါးစပ်ရဲ့အပြင်ကို ထွက်နေတတ်ပါတယ် ( Protruding Tongue )
၆။ လက်ချောင်းလေးများ တိုတုတ်ပြီး ၊ လက်ဖ၀ါးတွင် အရေးကြောင်း( Palmar Crease )
တစ်ခုသာပါရှိပါတယ။် ( Simian Crease ) လို့ခေါ်ပါတယ်။
၇။ ခြေမနဲ့ ခြေညှိုးကြားအကွာအဝေး ကျယ်နေတတ်ပါတယ်။ ( Sandle Gap )
၈။ အရပ်အမောင်းဟာ သာမန်ကလေးတွေထက် ပုပါတယ် ။
၉။ ကြွက်သားများဟာ သာမန်ထက် တင်းအားလျှော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ( Hypotonia )
ဒေါင်းလေးများတွင်အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများကိုလဲ ဆက်စပ်တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ် ။
၁။ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများ ( Heart Defect ) ။ အထူးသဖြင့် နှလုံးအတွင်းခန်းနံရံတွင်
ပေါက်များပါခြင်း ။ ( Atrial Septal Defect , Ventricular Septal Defect )။
၂။ မွေးရာပါ အစာလမ်းကြောင်းပိတ်ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
(ဥပမာ- Esophageal Atresia အစာရေမြိုပြွန်ကျဉ်းခြင်း )
၃။ လူကီးမီးယား ( Leukemia ) ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း ။
၄။ ကိုယ်တွင်းခုခံအား စနစ် ( Immune System ) မကောင်းသောကြောင့်
ကူးစက်ရောဂါများ ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း ။
၅။ မျက်စိ ၊ နား အကြား၊ အမြင် ချို့ယွင်းခြင်း ။
ဒေါင်းရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိပါ ။ လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
ထောက်ပံ့မှုများကို သာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းကလေးတစ်ယောက်ကို
ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် တတ်ကျွမ်းသော သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကလေးအထူးကုဆရာဝန်များ ၊
မျက်စိနားနှာခေါင်းအထူးကုဆရာဝန်များ ၊ အစာလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ ၊ စကားပြောရာတွင်နှေးကွေးတတ်သောကြောင့် Speech Therapist များ ၊
ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးမှုအတွက်Physiotherapist များ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ Therapist များ ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ အစရှိသော အတတ်ပညာရှင်များ ပူးပေါင်းဆေင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသော မွေးရာပါရောဂါများ ၊
ဆက်စပ်ဆင့်ပွားရောဂါများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်စစ်ဆေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါကို မိခင်ဝမ်းအတွင်းရှိနေစဉ်ကာလကတည်းက သိပ္ပံနည်းကျ
ကြိုတင်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းကလေး တစ်ယောက်မွေးဖူးသော
မိခင်များအနေဖြင့် နောက်ကလေးတစ်ယောက်မယူခင်မှာ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်သူ ( Genetic Counselor ) နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် Down's Syndrome ကလေးငယ်များဟာ မွေးရာပါ
ရောဂါတွေကို ခံစားနေကြရတဲ့ သာမန်ကလေးငယ်လေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့လေးတွေမှာ သာမန်ကလေးတွေထက် ဖွံ့ဖြိုးမှု ၊ ဥာဏ်ရည်တိုးတက်မှု
နှေးကွေးသော်လည်း သာမန်ကလေးများကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုများ
( အားကစား ၊ စာသင်ကြားခြင်း ၊ ဂီတအနုပညာ ) တွင် စိတ်ပါဝင်စားပြီး
ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တိုးတက်ရှင်သန်ဖို့ဆိုတာ
လူအများကြီးပေါ်မှာမှီခိုနေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသနားစရာကောင်းတဲ့
ကလေးငယ်လေးတွေဘ၀ သာယာစေဖို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်ကြပါစေလို့
ကျမ သားကို ကျောင်းပို့တိုင်း သားတို့ကျောင်းမှာ သူတို့လေးတွေကို တွေ့ရတယ် (၃)ယောက်
လောက်ရှိပါတယ်။ ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့လေးတွေကို
ကျမသိပ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့အကြောင်းလေးတွေကို
အမှတ်တရ ရေးသား တင်ပြရင်နဲ့ နားခွင့်ပြုပါရှင်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, August 24, 2009 Links to this post
ကျမ အတွက် လိုအပ်မယ် ထင်လို့သတိရနေရအောင် တင်ထားရင်နဲ့ လူတိုင်းအတွက်လဲ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပတ်သက်နေသမျှ လိုအပ်နေမှာပါ။
"ကိုယ့်အတွက်" လို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့တစ်ပြိုက်နက် တစ်ဖက်လူရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း
ထည့်တွက်သင့်တယ်။ သူ့အတွက် ပိုစဉ်းစားပေးသင့်တယ်။ ဒါတွေက ကြင်နာ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့အပြင်
တစ်ဖက်လူကို လေးစားရာလည်းရောက်တယ်။ လင်မယားကြားမှာ ဒါကိုပိုအလေးထားသင့်တယ်။
လူ့ဘဝမှာ နေသာရက်၊ မိုးအုံ့ရက်တွေရှိတယ်။ နေသာတယ်ဆိုတိုင်း အမြဲတမ်းနေသာနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ မိုးကြီးလေကြီးလည်း ကျတတ်တယ်။ မိုးမိသွားတဲ့လူကို လက်ညှိုးထိုး ဟားတိုက်မရယ်ပါနဲ့။ ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ထက် ဒုက္ခရောက်နေသူ၊ ကိုယ့်ထက် ထိခိုက်နာကျင်နေသူကို ဒီလောကကြီးရဲ့ အလှအပနဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ခံစားနိုင်အောင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ။ ဒီလို အကြင်နာမေတ္တာတွေကို မျိုးပွါးပါ။ ကိုယ်သတိမမူမိချိန် အဲဒီအကြင်နာတွေကနေ လှပတဲ့ ပန်းပွင့်တွေ ဖူးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင်၊ စာတစ်ပုဒ်၊ တစ်ပိုဒ်ကလည်း အကြင်နာတွေကို မျိုးပွါးတာပဲဖြစ်တယ်။
ဂီတတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တူရိယာတစ်ခုကို တီးတတ်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဂီတက ကိုယ့်စိတ်ကို ဆေးကြောပေးသလို ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ်၊ အတွေးတွေကို ပိုပွင့်စေတယ်။ ကိုယ်ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတယ်။ ဘဝအတွက် ခံစားမှုရသာပေါင်းစုံ သယ်လာပေးတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေကို လုံးဝ အစပြန်ဖော်လို့မရအောင် မေ့ထားသင့်တယ်။ အခက်အခဲ တစ်ခုကြုံခဲ့တိုင်း ရင့်ကျက်ကြီးပြင်းဖို့ အသိဥာဏ်တစ်ခုတိုးတယ်လို့ ထင်မှတ်ပါ။ တစ်ချို့ ထိခိုက်နာကျင်မှုနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ သင်ယူပါ။ ဒီအသက်အရွယ်က ကလေးလေးတစ်ယောက်လို့ အသံထွက် အော်ငိုသင့်တဲ့ အရွယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အသုဘတစ်ခါ ပို့ပြီးတိုင်း သင်္ခါရတစ်ခါ ရတတ်ကြတယ်။ တစ်ခါဖျားနာတိုင်း ပိုတန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်း သိတော့တယ်။ ကျေးဇူးတရားကို မိနစ်၊ စက္ကန့်တိုင်း သတိရသင့်တယ်။ ကျေးဇူးတရားက ကိုယ့်ဘေးက လူတွေကို တန်ဖိုးထားစေသလို လောဘ၊ အတ္တနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းတွေကို ပြေငြိမ်းစေတယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်။
နေ့စဉ်လူ့ဘဝကို သနားကြင်နာခြင်းတွေနဲ့ လှည့်ပတ်နေသင့်တယ်။
လူ့ဘဝ တစ်ခါပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ထောက်နားတာ ပိုရှည်တဲ့ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းဖို့ပါ။
ကိုယ့်ဘဝ အနားယူချိန် မရှိဘူးလို့ မငြီးငြူပါနဲ့။
တစ်လမှာ တစ်ရက်လောက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူဖို့ ကိုယ့်ကိုအားလပ်ချိန်ပေးပါ။
လူ့ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဖိအားက စိတ်ဖိအားပဲဖြစ်တယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်တဲ့အချိန် တောင်တောင်မြောက်မြောက် စဉ်းစားမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်စိတ်ကို ဖိအားမပေးဘဲ လုပ်လိုက်ရင် ဒါဟာ ကောင်းသောအစပျိုးခြင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကိစ္စတွေက ကိုယ်ထင်သလောက် မခက်ခဲဘူးဆိုတာ သိရလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့က အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အသက်ရှင်တယ်။
တစ်ချို့က စိတ်ကူးအိပ်မက်ကြောင့် အသက်ရှင်တယ်။
တစ်ချို့က ငါဘာလို့ အသက်ရှင်နေရလဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုရှာရင်း အသက်ရှင်တယ်။
တစ်ချို့က သတ္တိနဲ့ အသိဥာဏ်ကိုမှီပြီး အသက်ရှင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ စိတ်တို ဒေါသထွက်ရသလဲ? ကားကြပ်လို့? တန်းစီလက်မှတ် ဝယ်ရလို့? သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငြင်းခုန်လို့? အရောင်းစာရေးမ အချိုးမပြေလို့?
စိတ်တိုဒေါသ မထွက်ခင် ဘယ်အရာတွေကမှ တကယ့်စိတ်တိုဒေါသ ထွက်သင့်တဲ့ အရာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ- လူမမယ်ကလေးတွေ ညှင်းပမ်းနိုက်စက်ခံရတာ၊ ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲငတ်ပြတ်တာ၊ စစ်ပွဲနဲ့ မငြိမ်းချမ်းမှု.... စတာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အထက်က အရာတွေနဲ့ ကိုယ်ဒေါသထွက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ဒေါသထွက်သင့်တဲ့အရာပေါ် ကိုယ့်ဒေါသစိတ်တွေ မကျရောက်ခင် ဒီလိုအခြေအနေအတွက် ကိုယ်ဘာများ လုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ အရင်စဉ်းစားပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိမှ ဒီကမ္ဘာကြီး ပိုလုံးဝန်းမယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိမှ ထူးဆန်းအံ့သြမှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ်။
တခြားလူရဲ့ ကောင်းကွက်ကိုမြင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်ကို မြှင့်တင်နိုင်မယ်။
တခြားလူကို အကောင်းပြောမှ သူနဲ့ကိုယ့်ကြားက ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုကောင်းနိုင်မယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အရာအားလုံးရဲ့ မောင်းနှင်အားဖြစ်တယ်။
မေတ္တာစစ်ကို ပေးမှ မေတ္တာစစ်ကို ပြန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် နာကျင်မှုတော့ ရှိမှာပဲ။
ကိုယ်စိတ်ညစ်လို့ သူပျော်ရင် အဲဒါ ရန်သူတဲ့။
ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရသလို စိတ်ပျက် အားငယ်ချိန်မှာလည်း ဒီအားငယ်မှုတွေဟာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်ရမယ်။
စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ပါးစပ်ဖျားမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို ချိတ်ဆွဲထားပါ။
လောကမှာ ဘယ်တော့မှ သွားပုပ်လေလွှင့် အပြောမခံရတဲ့လူ မရှိသလို အမြဲတမ်း အချီးကျူးခံနေရသူလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ်စကားများရင် အပြစ်ပြောမယ်၊ ကိုယ်စကားနည်းရင်လည်း အပြစ်ပြောမယ်၊ ကိုယ်စကားလုံးဝ မပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေရင်လည်း အပြစ်ပြောမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောကမှာ မပြောမခံရတဲ့လူဆိုတာ မရှိဘူး။
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ မဟုတ်မမှန် သွားပုပ်လေလွှင့် သတင်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေဖြစ်တယ်။
စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်း မကျတဲ့အခါ နာကျင်အောင် ခံစားရတယ်။ အဲဒီနာကျင်မှုကို သင်အလဲထိုးမလား...? နာကျင်မှုက သင့်ကို အလဲထိုးတာကို ခံမလား...?
လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေး။ ခဏတာအချိန်လေးမှာ ၀မ်းနည်းစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ ဘာတစ်ခုမှ ချန်မထားခဲ့နဲ့။ ရီချင်ရင် ရီပစ်လိုက်၊ ငိုချင်ရင် ငိုပစ်လိုက်၊ ချစ်ချင်ရင် ချစ်ပစ်လိုက် ဘယ်ဖိအားနဲ့မှ ကိုယ့်ကို ထိန်းချုပ်မထားလေနဲ့။
ကိုယ်အခုလုပ်နေတာတွေ ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ... ဘယ်ဟာက အမှားလဲ မသိဘူး။ ကိုယ်အိုမင်းလို့ သေဆုံးခါနီးမှ အမှား၊ အမှန်ကို သိနိုင်တော့မယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အိုမင်းသေဆုံးသွားမဲ့ အချိန်ကိုစောင့်ပါ။
လူတစ်ချို့က မိုက်ရိုင်းမယ်။ လူတစ်ချို့က ကောက်ကျစ်မယ်။ သူတို့နေရာမှာ ၀င်ရောက်ခံစားကြည့်မှ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ထက် သနားစရာကောင်းမှန်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် လူကောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ လူဆိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကြုံဖူး ဆုံဖူးသူကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပါ။
ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ၊ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်မရတဲ့အခါ၊ လုပ်နေသမျှ အရာမရောက်တဲ့အခါ စိတ်ပန်း လူပန်းဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျလာရင် ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေကို ကျွန်မ ဖတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မလို တစ်ခုခု ခံစားနေရသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကျမ ဒီစာလေးတွေကို အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေက ကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ၊ ကျမလိုဘဲဖတ်ပြီး ကြိုက်ကြမယ်လဲထင်ပါတယ်။
*မလေးရှား အချုပ်ခန်းရောက် မြန်မာများရဲ့ကျန်းမာရေးထ...